UVera Brezhneva: Ndineempazamo
Ingaphezu kwenyanga idlulile ukususela kwilizwe lethu, i-soloist ye-band band "VIA Gra" uVera Brezhneva wayeka ukucula. Ngoku uthetha kwaye unike imali. Kwi-First Channel e-Russia, umdlalo omtsha wezemidlalo, "iMilingo yeZhumi," apho iVera inendima yomboniso, iyimpumelelo. Bathi, ngaphandle kokuncediswa ngumvelisi we-First Alexander Tsekalo.
Indawo yakhe eBrzhnev yaba yinto engafanelekiyo emva kokuba uAlexander ethatha udadewabo omncinci uVera, uVera. Ngokubanzi, kukho - ubudlelwane bomtshato. Ukholo luvuyiswa kakhulu ngale nto, kuba ndide ndifuna ukushiya iqela laseKonstantin Meladze, kodwa andinakukucinga okokuzibonisa. Ngoku uyazi ...
"Ndinegama likaBrezhnev kubavelisi"
- Ukuqwalasela inkqubo, ngoku ngoku kufuneka ugqoke iingubo ezingcolileyo, kodwa izibopho ezinzulu.
- Ndiyathanda iintlobo zeengubo. Kwihotele kulungele ukuba ungene kwiingqungquthela. Ngamanye amaxesha, xa kukho isimo esifanelekileyo, ndinxiba iingubo ezimfutshane kunye ne-sarafans. Andinayo ikhabethe elincinci! Kodwa izinto ebomini bam azidlala indima enkulu. Ngokuqhelekileyo ndicinga ngempahla xa ndiya kusihlwa, ukufumana okanye ukufumana. Ubomi bam ndidla ngokugqoka. Ngaphambi kwesibuko ndichithe imizuzu engama-15 ekuseni, xa ndihlamba ndiyitshiza inwele zam. Kwaye malunga nenkqubo ... Ubuncinane kwisivakalisi ndineengubo ebomvu kakhulu.
- Yinyaniso. Ngendlela, qhubeka emoyeni kakhulu!
- Kwiminyaka emininzi yomsebenzi phambi kwekhamera, sele ndiqhelekile kuyo. Ngoko ngonwaba ndijamelana nayo. Nangona kwakukho abadlali abambalwa abamnandi kum. Kodwa, maye, inkambo yomdlalo ayikwazi ukuchaphazela. Ndiza kuba novelwano. Ngokuqhelekileyo kubafazi. Ngendlela, ndandikhathazeka kakhulu xa ndandwendwendwe kwinkqubo kaMaxim Galkin "Indlela yokuba ngumgidi-mali?"
- Kule projekthi entsha, usenjalo uVera Brezhneva. Kodwa oku akulona igama lakho langempela.
- Ndinegama likaBrezhnev kubavelisi. Ngaphantsi kwesi sigama sithe ndathetha iminyaka emihlanu nesiqingatha. Emva koko, ndivela eDneprodzerzhinsk, idolophu yaseMonidy Brezhnev. Igama lam lenene nguGalushka - bambalwa abantu abazi.
Ngaba ugcina ubudlelwane kunye nabangaphambili bamalungu e-VIA GRA?
- Ndidibana neAlbina, kunye nabavelisi bebhanki uDmitry Kostyuk kunye noKonstantin Meladze. Ngokuqhelekileyo eMoscow siya kwiindawo zokutyela kunye. Kodwa andinxibelelani noNadya Granovskaya noAnya Sedokova. Ndiyazi ukuba baneeprojekthi zabo kumabonwakude. Ngendlela, ndicinga ukuba ukubunjwa esiye senziwa kunye noNadia noAnya kwakungeyona nto ingcono kakhulu ku- "VIA Gry".
- Andifuni ukubuyela kwiqela?
- Ngenxa yoko, umnqweno wam kunye nezicwangciso zamalungu okwangoku "iVIA Gry" kufuneka ihambisane. Nangona lo mbuzo awufanelekanga, masiyeke kwikamva. Yonke into ingaba ...
"Xa iVIA Gr iboniswa kwiTV, intombi kaSonya iyabuza ukuba kutheni ndingekho"
"Ubuncinane umntu oyedwa wakukhathalela." Le ntombi yendodana kaNyana.
- Inyaniso ye nyaniso. Xa ndishiya iqela, uSonya wathi ngoku ndifanele ndizinike ixesha lam elikhululekile kuye. Ngoku, xa ebukela imisebenzi yeVIA Gry, ubuza isizathu sokuba andingekho. Ngendlela, u-Sonya usele ucula. Ukuba unquma ukuba ngumculi, mnike amava akhe. Wonke umntu uthi sifana nabo, njengamaconsi amabini amanzi.
"Kwakhona i-blonde enhle ngamahlo aluhlaza?"
"Xa ndivuka ekuseni, ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ndinguye." (Uhleka.) Kodwa njengaye nawuphi na umntu, ndinamaphutha. Enyanisweni, andiyi kuthetha ngabo. Ngaphandle koko, abantu baya kuqala ukuqwalasela oku.
- Unokujamelana njani noxinzelelo?
- Ndikhwele imoto yam. Ndine-jeep enkulu emnyama. Ndiyishiya kuyo kumzila kwaye ndiphumle. Ndiqhuba iminyaka emihlanu, ndiyathanda ukuqhuba ngaphandle komqhubi, kodwa kuphela eKiev. EMoscow, ndakhe ndazama ukuhlala emva kwesondo lomhlobo womhlobo kwaye andifuni. Ukongezelela, kukho iindawo ezinobungozi! Sekunjalo ndiyithandayo idolophu yaseKiev, apho intsapho yam ihlala khona. Nangona kunjalo, ndade ndikwazi ukuzisebenzisa kwiMoscow kunye neengqungquthela zaso.
- Nguwuphi uhlobo lomculo odlala kwimoto yakho?
- Britney Spears, Sting, "VIA Gra", u-Adriano Celentano.
"Bathi uCelentano ngumntu othe tye."
- Enyanisweni? Andizange ndidibana naloo nto ebomini bam. Ngokuqhelekileyo andiyiqwalasela ukubonakala. Ngokuqhelekileyo, ngobudlelwane namadoda, ndiyinyamekele, ndiyesaba ukutshiswa. Iindlebe malunga neenveli zam zivame ukunyanyiswa. Ndandingenakukwazi ukufumana umtshato kunokuba ungabonakala ngaphandle. Nangona ngoku intliziyo yam ixakekile.
Ngaba uyazibona ungumfazi onoyolo?
- Inwabe ayikwazi ukuhlala isigxina. Ndicinga ukuba ndiphumelele kwaye ndinenhlanhla ...
Iingcamango zabantu abadumileyo ngothando
Iintlanzi ezintle kakhulu zaseHollywood
UNina Dobrev kunye no-Ian Somerhalder: uthando alukho kwisikripthi
Imiqondiso ye-10 yokuba ufuna ngokukhawuleza ngesondo
Ukuqhelanisa imisebe yempembelelo yayo kumzimba
Iifatates ezibhakiweyo kwiibhotile
Izilwanyana kunye nezidlo ezidliwayo
I-coat ye-Oatmeal kunye necolethi emhlophe kunye ne-almond
Ukunikezelwa ngesihloko sokhemistri kwizonyiso
Isitayela se-Art Nouveau esilula kunye esisebenzayo
Izindlela eziphumelelayo zokususa isikhumba esinqabileyo seenyawo